fihenan-tsasatra avo lenta Famoronana vatan'ny vatan'ny Varahina
Fiangonan-tsoavaly avo lenta fihenan'ny frezy
Vita am-pahombiazana ny mpivarotra roa mifangaro 45 XNUMX varahina
DW-UHF-10kw Mpanafaka famatsiana fampitaovana fanentanana
Vita volafotsy StayBrite # 8 nomen'ny mpanjifa
Fandoavam-bola bridgit nomen'ny mpanjifa
Miaraka amin'ny zorony varahina
Silo: eo ho eo ny 550 ° F (288 ° C)
Fotoana: 20 sec
Flux dia mihatra amin'ny tonon-taolana rehetra.
Ilay fivoriambe dia natsangana ho fananganana
Ny fanafanana fametrahana induction dia ampiharina amin'ny 15 seg
Ny barazy mihosotra dia anatra amin'ny tonon-taolana
Koa satria ahosotra amin'ny alàlan'ny familiana azy ny gony, ny coil dia apetraka ao ambanin'ny tonony, miatrika ny lafiny hita amin'ny rindrina. Ny lafiny hita maso amin'ny fantsona dia mametraka amin'ny rindrina hazo fisaka, izay tsy mamela ny halaviran'ny boribory miloka ary mitsoka. Izany dia mitazona ny masony tsara tarehy sy madio, raha ny tsimandina kosa dia mihinana anatiny.
Raha asiana takelaka solder no ampiasaina, dia afaka napetraka eo ambonin'ilay atra ny coil. Raha ampiasaina ny coil roa manokana, dia azo atao ny tonon-taolana (ambony sy ambany) miaraka amin'ny tifitra iray.
Tsy ilaina ny fametahana rindran-tsary amin'ity tranga ity. Jereo ilay horonan-tsary ary alao ny sary apetaka raha mila fanazavana fanampiny.
Tsy misy fanadiovana manokana ilain'ny andaniny roa. Ireo santionany amin'ireo sary dia lamba lamba lamba nofonosina ihany.
Sokajy Technologies Tags haingam-pandeha matetika, mpivaro-bidy, induction soldering, zoro fametrahana varotra, induction soldering fanaterana, induction soldering machine, soldering, varahina varahina, zoro varahina mivarotra, fivarotana varahina mivarotra, varahina varahina, milina fampidirana famatsiana Post Fikarohana
fantsona varahina fantsona varahina amin'ny valva varahina
Induction Famoronana tariby varahina